दर्जनभन्दा बढी विमानस्थल गौचरण बने ४३ घाटामा !! | सुदुरपश्चिम खबर
दर्जनभन्दा बढी विमानस्थल गौचरण बने ४३ घाटामा !!
सुदुरपश्चिम खबर प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७७ 2
काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशभर निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलको संख्या ५३ छ । यसमध्ये १० वटा विमानस्थल मात्र नाफामा सञ्चालन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्राधिकरणले निकालेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ यताको पाँच वर्षको औसतः आम्दानी तथा खर्च विवरण अनुसार त्रिभुवन विमानस्थल, हिमाली भेगका दुई र तराईका सात विमानस्थलमात्र नाफामा छन् । ४३ वटा विमानस्थल घाटामा छन् र तीमध्ये कतिपय त आम्दानीविहीन नै छन् ।
प्राधिकरणका सबैभन्दा राम्रो आम्दानी गर्नेमा त्रिभुवन विमानस्थल नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु र यात्रु र उडानको संख्या बढी हुने कारणले काठमाडौंले स्वाभाविक रुपमा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्रिभुवन विमानस्थल अहिले नेपाललाई अरु देशहरुसँग हवाईमार्गसँग जोड्ने एक मात्र विन्दु हो ।
नाफामा चलेका १० विमानस्थल
पछिल्लो ५ वर्षको औसतः तथ्यांक अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलले वाषिर्क औसतः ६ अर्ब ७३ करोड आम्दानी गर्छ, खर्च भने १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानथस्थल बन्दै गरेको भैरहवा विमानस्थलको वाषिर्क औसत आम्दानी ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ र खर्च ४ करोड १३ हजार रुपैयाँ छ ।
विराटनगर विमानस्थलको पछिल्लो ५ वर्षको औसत आम्दानी वाषिर्क ६ करोड ९३ लाख र खर्च ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ ।
झापाको चन्द्रगढीको आम्दानी २ करोड ५६ लाख र खर्च २ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ ।
बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलको आम्दानी ५ करोड ७५ लाख र खर्च ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ५ । कैलालीको धनगढी विमानस्थलको आम्दानी १ करोड ८१ लाख र खर्च १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ ।
पोखरा विमानस्थलको औसत वाषिर्क आम्दानी ७ करोड ३६ लाख र खर्च ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । चितवनको भरतपुर विमानस्थलको औसत वाषिर्क आम्दानी २ करोड ३२ लाख र खर्च १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ ।
सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलले औसत वाषिर्क १ करोड ६८ लाख आम्दानी गर्दा ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलको आम्दानी १ करोड ३ लाख र खर्च ७७ लाख २० हजार रुपैयाँ छ ।
पहाड र हिमाली भेगका विमानस्थल घाटामा
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा पहाडी र हिमाली भेगका अधिकांश विमानस्थल घाटामा सञ्चालन भएका छन् । लामो समयदेखि बन्द रहेर हालै सञ्चालनमा आएका तराईका राजविराज र जनकपुर विमानस्थलसमेत घाटामा छन् । लुक्ला उडानमा काठमाडौंको विकल्पका रुपमा सञ्चालनमा आएको रामेछाप विमानस्थल, कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको विमानस्थल पनि घाटामा छ ।
यी विमानस्थलमा उडान–अवतरणबाहेक अन्य आम्दानी नहुने, जहाजको रात्रीकालीन विसान नहुने भएकाले पार्किङ शुल्क समेत नउठ्ने भएकाले यस्ता विमानस्थलको आम्दानी न्युन भएको हो । घाटामा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको सूचीमा पर्यटकीय गन्तव्य रारादेखि चलेको विमानस्थल सिमरासम्म छन् । सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि बन्द रही हालै सञ्चालनमा आएका डोटी, बझाङ, बाजुराका विमानस्थल समेत घाटामा सञ्चालित छन् ।
घाटामा रहेका विमानस्थल
राजविराज विमानस्थल ः
आम्दानी ः ५ लाख ३३ हजार
खर्च ः ६ लाख ४० हजार
आम्दानी ः ९० लाख ७१ हजार
खर्च ः १ करोड ७३ लाख
सिमरा विमानस्थल ः
आम्दानी ः १ करोड ३२ लाख
खर्च ः २ करोड २० लाख
सुर्खेत विमानस्थल ः
आम्दानी ः ५१ लाख २ हजार
खर्च ः १ करोड १८ लाख
दाङ विमानस्थल ः
आम्दानी ः ४ लाख ७२ हजार
खर्च २६ लाख २० हजार
ताप्लेजुङ विमानस्थल ः
आम्दानी ः ४ लाख ४० हजार
खर्च ः ३४ लाख ३१ हजार
तुम्लिङटार विमानस्थल ः
आम्दानी ः २२ लाख ८६ हजार
खर्च ः ८० लाख ८ हजार
भोजपुर विमानस्थल ः
आम्दानी ः १ लाख ७४ हजार
खर्च ः ३५ लाख ६० हजार
थामखर्क विमानस्थल ः
आम्दानी ः ३० हजार ८ सय
खर्च ः २९ लाख २५ हजार खर्च (घाटा)
मनमायाराइ खानीडाँडा विमानस्थल ः
आम्दानी ः २६ हजार ९ सय
खर्च ः २२ लाख ७२ हजार
लामीडाँडा विमानस्थल ः
आम्दानी ः ८९ हजार १ सय
खर्च ः २९ लाख ३९ हजार
रुम्जाटार विमानस्थल ः
आम्दानी ः २ लाख २२ हजार
खर्च ः ३३ लाख ८८ हजार
फाप्लु विमानस्थल ः
आम्दानी ः २४ लाख १६ हजार
खर्च ः ३३ लाख ५४ हजार
रामेछाप विमानस्थल ः
आम्दानी ः ११ लाख ६८ हजार
खर्च ः ३९ लाख २८ हजार
जोमसोम विमानस्थल ः
आम्दानी ः ५९ लाख ७५ हजार
खर्च ः ६८ लाख ६१ हजार
जुम्ला विमानस्थल ः
आम्दानी ः ११ लाख १ हजार
खर्च ः ५२ लाख १२ हजार
रारा विमानस्थल ः
आम्दानी ः २२ लाख २३ हजार
खर्च ः २७ लाख ६२ हजार
सल्ले विमानस्थल (रुकुम) ः
आम्दानी ः १ लाख ७३ हजार
खर्च ः ३१ लाख २४ हजार
साँफेबगर विमानस्थल ः
आम्दानी ः १७ हजार
खर्च ः ६ लाख ९४ हजार
जुफाल विमानस्थल ः
आम्दानी ः ५ लाख १७ हजार
खर्च ः २५ लाख ९४ हजार
बझाङ विमानस्थल ः
आम्दानी ः शून्य
खर्च ः १० लाख ३१ हजार
बाजुरा विमानस्थल ः
आम्दानी ः ५ लाख ३७ हजार
खर्च ः १९ लाख ३६ हजार
डोटी विमानस्थल ः
खर्च ः ८ लाख ७२ हजार
गौचरण बने दर्जनभन्दा बढी विमानस्थल
देशका दर्जनभन्दा बढी विमानस्थल भने उपयोगविहीन छन् । स्थानीय तहले सञ्चालनको पहल गरेपनि बागलुङ विमानस्थल यात्रुकै अभावमा बन्द भएको छ । स्थानीय तहले एयरलाइन्स कम्पनीलाई सहुलियत दिएर्र उडान प्रारम्भ गरिएको थियो । तर, सहजै सडक यातायातले छोएको यस क्षेत्रमा हवाई यात्रु भेटिएनन् । चितवनको मेघौली विमानस्थल यस्तै समस्याबाट गुज्रिएको अर्को विमानस्थल हो । बागलुङकै ढोरपाटनमा खुलेको विमानस्थल समेत यात्रुको अभावमा बन्द अवस्थामा छ ।
गोरखाको पालुङटारमा रहेको विमानस्थल पनि पृथ्वी राजमार्ग बनेपछि बन्द भएको थियो । सडक यातायातको पहुँच र सगरमाथा जाने पर्यटक सिधै लुक्ला जाँदा जिरी दोलखाको जिरी विमानस्थल बन्द छ । मनाङमा कालोपत्रे गरेको विमानस्थलसमेत अहिले यात्रु नभएका कारण बन्द अवस्थामा छ । यो विमानस्थलमा गत वर्ष जहाज लैजाने कोशिस गरे पनि नियमित उडान हुन सकेन । निर्माण पूरा नहुँदै धुले मैदानमा परीक्षण उडान गरिएको गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थल, रुकुम विमानस्थल, महेन्द्रनगर विमानस्थल, टीकापुर विमानस्थलसमेत अहिले बन्द विमानस्थलको सूचीमा छन् ।
यी हुन् बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थल
आम्दानी ः २२ हजार ८ सय
खर्च ः १० लाख ५१ हजार
आम्दानी ः ४९ हजार ३ सय
खर्च ः १९ लाख ५३ हजार
मनाङ विमानस्थल ः
आम्दानी ः ५१ हजार ४ सय
खर्च ः १० लाख ३० हजार
कांगेलडाँडा विमानस्थल ः
आम्दनी ः ५४ हजार
खर्च ः ५ लाख ५० हजार
मेघौली विमानस्थल ः
आम्दानी ः ७ हजार आम्दानी
गुल्मी रेसुंगा विमानस्थल
(अच्युत पुरीले onlinekhabar.com मा लेखेका छन्।)